आफ्नाले नै आफ्नालाई नछाडेपछि ...
आफ्नाले नै आफ्नालाई नछाडेपछि …
मुलुकको इतिहासलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने केन्द्रीकृतरुपमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडनमा परेका समुदाय मधेसी समुदाय नै हुन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै दोहोरो र व्यवहारिक रुपमै उत्पीडनमा परेका समुदाय त्यहाँका दलित समुदाय हुन् । जुन उत्पीडनको इतिहासको कुनै लेखाजोखा छैनन् । जसले मानवीय विभेदका कारण दलित मनोविज्ञानमा ठूलो चोट पुगेको छ । उत्पीडनको त्यो इतिहासलाई जनमानसमा पुर्‍याउने शक्ति र सामर्थ्य समेत उनीहरुमा निहित छैन । अहिले पनि जुन स्तरबाट त्यसको उठान र विकास हुनुपर्ने हो, हुनसकेको छैन् ।
मधेसमा मधेसी मधेसीकै अस्तित्व स्वीकार्दैनन् । एक मधेसीले अर्को मधेसीलाई कसरी आफ्नो काबुमा राख्ने भन्ने प्रपञ्च र खुरापातिमा दिनरात खर्चिन्छन् । त्यसका लागि पहाडियाहरुको चाकडी चापलुसी र दलाली गर्न पनि पछि पर्दैनन् । यतिसम्म गर्छन् कि सांस्कृतिकरुपमा समेत तल्लोस्तरमा गिर्ने काम भइरहन्छ । तर, स्वयम् मेहनत गरेर जीवनलाई अगाडि बढाउँछु भने सोंच चिन्तन कमै देखिन्छ । त्यही रोगको शिकार मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा देखिन्छ । मधेसमाझ यो समस्या व्यापक र जडको रुपमा विद्यमान छन् ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक तथा समावेशीय व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा भने मुलुक यथास्थितिवादकै गोलचक्करमा फसेका छन् । ठूलठूला कुरा र चर्काचर्का भाषा तथा झूटो आश्वासनले मुलुकको अवस्था झनै जोखिम अवस्थामा पुगेको छ । सर्वसाधारण नागरिकले कानुनीरुपमा पनि दोहोरो उत्पीडनमा थोपरिएको महसुस गर्न बाध्य छन् ।
लोकतन्त्र त आयो तर, यसले पिंधमा रहेका नागरिकको हकहित र संरक्षण गर्ला भनेको त झनै उत्पीडनको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको सप्तरी खड्क नगरपालिका ३ का श्यामसुन्दर राम गुनासो गर्छन् ।
संघीयता आइसकेपछि उत्पीडित जाती र समुदायको समावेशीताको आधारमा जसरी कर्मचारीलाई भर्ना गरियो, यसले स्थानीय तहमा खासगरी मधेसमा जुन सरकारी कार्यालयमा जुन जात वा समुदायका मधेसी कर्मचारीलाई सरकारले मधेसमा पठायो त्यसले मधेसको दलित लगायत उत्पीडित समुदायमा झनै कानुनी रुपमै समस्या र उल्झन थपियो । जुन सरकारी कार्यालयमा जुन जाति विशेषका कर्मचारी आएको छ उसले त्यही जातको बढी सेवा गर्ने र अन्य जातिलाई झन् दबाउने र विभेद गर्ने गरेका छन् । आफ्नै मधेसी कर्मचारीले मधेसीको समस्या समाधान गर्दैनन् । हैरानी परेसानी पार्छन् । घुस खाने हर्कत देखाउँछन् र खान्छन् पनि । घुस नपाए कामै गर्दैनन् । बरु मधेसमा पहाडी कर्मचारीले मधेसीको काम विनाभेदभाव सहयोग गरेको सिरहा लहान नगरपालिका ८ का धनीर सदाय आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् ।
अहिले स्थानीय तहको विकास निर्माणका समस्या पनि त्यस्तै छन् । जुन जातको मान्छे जितेका छन् ति जातिहरुको बस्तीमा विकास धेरै र अन्य बस्तीहरुमा विकास कम भइरहेको छ । अझ कतै कतै त दलित समुदाय बसेको बस्तीमा विकासको नाममा डोजर चलाएर उठिबास पारिएको अवस्था छ ।
यो व्यवस्था र अभ्यासले वैधानिकरुपमै मधेसमा जातिय विभेदलाई थप मलजलगरी व्यवस्थित गरेको महसुस दलित समुदायले गर्न विवश छन् । यसबाट दलित समुदाय विक्षिप्त छन् । र, उनीहरु घर न घाटका भएका छन् । चुनावमा भोट लिनेबेला दलित समुदायमा रक्सी र पैसाको लोभलालचमा फसाएर दलित समुदायलाई उठिबास पारिरहेको अवस्था छ । जब कि सबैभन्दा बढी विकास निर्माणको काम दलित समुदायको व्यवस्थापनमा हुनुपर्थ्यो तर, यहाँका ठिक विपरीत कार्य स्थानीय तहमा भइरहेका छन् ।
मधेसका दलित समुदाय लामो समयदेखि दोहोरो उत्पीडनमा छन् । अप्रत्यक्षरुपमा केन्द्रीय सत्ताबाट उत्पीडनको मारमा छन् भने प्रत्यक्षरुपमा आमुनेसामुने स्थानीय स्तरमा लामो समयदेखि आफ्नै मधेसी समुदायबाट विभिन्न विभेद र उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । व्यवहारिक रुपमा र सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिकरुपमै पनि प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा मधेसी दलित मधेसीबाटै प्रताडित छन् ।
तर, दलितको नाममा मुठ्ठीभर पहाडी दलितले नै राज्यस्तरबाट सबै सेवासुविधा खोसिरहेका छन् । र, एनजिओ र आइएनजिओहरुको लगानी वर्ग नै फेर्न लक्षित भइरहेको छ । अनि त्यस्तै नतिजा देखिइरहेका छन् ।
तथापि, उनीहरु आफूलाई दलिकै दर्जा ओगटिरहेका छन् । त्यसैले दलितबाटै पनि दलित समुदाय उत्पीडनमा परेका पनि छन् । यसर्थ, केहि दलित समुदायको मुक्तिले मात्र समग्र दलित समुदायको समस्याको सामाधान हुन सक्दैन । दलित समुदायका केही अभिजात मानिसहरुले बहुसंख्यक दलितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् जसरी केही अभिजात वर्गीय मधेसीहरुले बहुसंख्यक उत्पीडित मधेसीहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ।
खासगरी पहाडमा विश्वकर्मा र परियार लगायतका जातिले विभिन्न नाम र थर परिवर्तन गरेर अहिलेको व्यवस्थामा पनि दलित समुदायको सबै अवसर र हिस्सा लुटिरहेका छन् । यसप्रति राजनीतिक दल र सरकार सचेत हुनैपर्छ । यो प्रवृत्तिले दलित समस्याको समाधान हुँदैन । बरु समस्या झन् बल्झिने खतरा बढ्छन् ।
एकातिर दलितमाथि केन्द्रीय उत्पीडन अर्कोतिर आफ्नो समुदायभित्रैबाट उत्पीडन र विभेद रहनु दुःखद कुरा हो । अर्को कुरा, दलित भित्रै पनि दलित उत्पीडनको समस्या जटिलरुपमा छन् । यसो हेर्दा तेहेरो उत्पीडनको मारमा छन् मधेसका वास्तविक दलित समुदाय । जबकि मुलुकमा १३.७६ प्रतिशत छन् दलित समुदाय । त्यसमा पनि प्रदेश २ अर्थात् तराई मधेसको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायका मात्र छन् । तर, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवसरको पहुँचमा छैनन् यहाँका दलितहरू ।
अहिलेको व्यवस्थाले पिंधमा रहेको उत्पीडित नागरिक र मानवीय विभेदमा परेका समुदायको हितमा काम गर्लान् कि नगर्लान् कुनै विश्वास छैन । के यो विषय गम्भीर छैन र ? यो समस्याको समाधान कसले गर्लान् ? अहिले त झन एक समुदायले अर्को समुदायको अस्तित्व नस्विकार्ने, अर्को समुदायले अर्को समुदायको नेतृत्व नस्विकार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । दलाल र पुँजीपति वर्गको अनावश्यक चाकरी चाप्लुसीमा समय बर्बाद गर्न रुचाउने तर, आफ्नै वर्ग र समुदायका लागि विष बनेर उभिने परम्परा घातक देखिन्छ मधेसमा ।
त्यसैले विगत इतिहासदेखि नै मधेसी मधेसीबाटै उत्पीडनमा पर्दै आएको इतिहासको निरन्तरतालाई अब क्रमभंग गर्दैपर्छ । बृहत तहमा भएका उत्पीडनको चर्चा हुनु तर मिहिनरुपमा भइरहेको झन ठूलो उत्पीडनको पक्ष चर्चा नहुनु दुःखद पक्ष हो । आफ्नै समुदायभित्र उत्पीडकको भूमिकामा जन्मिएकाहरु पहाडी समुदायलाई दोष दिएर आफूले गरेको प्रत्यक्ष उत्पीडनलाई ढाकछोप गरिरहेका छन् । र, मधेस पहाडका शासकहरु मिलेर मधेसी दलित समुदायमाथि विभिन्न उत्पीडन गर्दै आएका छन् ।
त्यसैले सरकार र राजनीतिक दल यो दोहोरो र तेहोरो उत्पीडनमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समानहरुबीचको समान प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउन आक्रामकरुपमा लाग्नुपर्छ । यी समुदायलाई मुलुक र यहाँको संविधान र व्यवस्थाप्रतिको अपनत्व लिन सक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसको व्यवस्थापन र विभेदलाई जरैदेखि उन्मुलन गर्न जरुरी छ । यसका लागि उत्पीडनमा परेका नागरिकलाई झन् उत्पीडन र आफ्नो वर्ग मिल्नेसँग काँखी च्यापेर सता र सरकारको बागडोरको यात्रा दीर्घकालीनरुपमा टिकन सक्दैनन् ।
सरकारी जनसेवा प्रवाहमा नेपालको उल्टो गति
ढुङ्गा र खीरको राष्ट्रवाद
‘बीमाबाट कमाई गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो क्षमतालाई चिन्‍नुहोस् !’
बाबुराम, परिवर्तन र कनकमणिहरु